खुशी को खबर ! भेटियो सीयोनाको दबाई ! बाबाले फेरी बिन्ति गरे ? के भयो?(भिडियो) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/खुशी को खबर ! भेटियो सीयोनाको दबाई ! बाबाले फेरी बिन्ति गरे ? के भयो?(भिडियो)
खुशी को खबर ! भेटियो सीयोनाको दबाई ! बाबाले फेरी बिन्ति गरे ? के भयो?(भिडियो)
काठमाडौ । बरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञा डा. सन्दीप श्रेष्ठ र नर्स एलिना गुरुङको १० महिने छोरी सियोना श्रेष्ठ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रोगसँग ल’डि’रहेकी छन् । सियोनाको उपचारको लागि ठूलो रकम लाग्ने उनकी आमा एलिना गुरुङले बताएकी छन् ।
उनका अनुसार आफ्नो छोरी सियोनाको उपचारको करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ । यस रोगको उपचार नेपालमा सम्भव नभएको तर, अमेरिकामा मात्रै सम्भव भएको सियोनाका आमा एलिनाले जानकारी गराएकी छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
छोरी सियोनाको उपचारको लागि तत्काल पैसाको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता श्रेष्ठ दम्पतीमाथि थपिएको छ । यस रोगको उपचार २ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने श्रेष्ठ दम्पतीको भनाइ छ । अब १ वर्षभित्र उक्त रोगको उपचार सुरु गरिसक्नुपर्ने सियोनाकी आमा–बुबाको भनाइ छ ।
छोरीको उपचारको लागि ठूलो रकमको आवश्यकता भएको हुनाले तत्काल जोहो गर्न सम्भव नभएका कारण सामाजिक अभियान मार्फत पैसा संकलन सुरु गरिएको छ । यसैबीच सियानाको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन सामाजिक अभियान संचालन गर्दा केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नकारात्मक कुरा गरेको भन्दै उनी मिडियामा रुँदै सार्वजनिक भएकी छैनन् ।
उनले आफ्नो छोरीलाई बचाउन सहयोग गर्नका लागि सबैलाई अपिल गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आएका नकारात्मक टिप्पणीका कारण आफुहरु निकै दुखी भएको बताएका छन् । छोरीकै लागि श्रीमानले डाक्टरी पेशाको काम समेत छोडेको र आफुले पनि जागिर छोडेर छोरीको उपचारमा लागेको बताएकी छन् ।
उनले एउटा मात्र नराम्रो टिप्पणीले सहयोग गर्न चाहनेहरुलाई नराम्रो असर गर्ने भएकाले त्यस्तो नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेकी छन् ।
गुजारा चलाउन नसकेपछि जीवन त्याग, तीन छोराछोरीको बिजोक
हाँस्य कलाकार शिबहरि पौड्याललाई मातृशोक, लेखे यस्तो मनछुने स्टाटस
काठमाण्डौ उपत्यका कुनैपनि बेला भासिन सक्छ : जलाधार विज्ञ !